Beach soccer : faha-57 maneran-tany ny Barea de Madagascar | NewsMada
Beach soccer : faha-57 maneran-tany ny Barea de Madagascar
Tsy mbola misy fifaninanana hatreto ny taranja baolina kitra lalaovina amin’ny tora-pasika na ny Beach soccer. Noho ny fisian’ilay valanaretina covid 19. Mandra-piandry izay ho hetsika ane­fa, tsy misy fiovana ny filaharan’ireo firenena 120 ao amin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), nivoaka ny 31 marsa, lasa teo.
Mbola mijanona eo amin’ny laharana faha-57 maneran-tany ny Barea de Mada­gascar, manana isa 180. Fa­henina kosa ny Malagasy, raha eo amin’ny filaharan’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf). Mbola mitarika kosa eto Afri­ka ny Liona-n’i Te­ranga, avy any Senegal, nahazo isa 1762. Marihina fa tompondakan’i Afrika, farany ny Senegaly.
Mitana ny lohany eran-tany i Portugal, manana isa 4266 arahin’i Bresil, amin’ny isa 4245 ary fahatelo, Italia nahazo isa 3946. Tafiditra ao anaty “Top 10” i Senegal, izay eo amin’ny laharana fahasivy, miaraka amin’ny isa 1762 ary faha-17 ny Maraokanina, isa 905 raha faha-19 ny Egyp­tiani­na.
Nihemotra be kosa ny Fran­tsay satria any amin’ny laharana faha-24, izany hoe verezin’i Senegal sy ny Ma­raokanina. Tsy manana afa-tsy isa 648 ry zareo, amin’izao fotoana izao. Mitana ny laharana farany kosa i Fidji, tsy manana isa mihitsy, hatreto. Aotra ihany koa ny an’i To­nizia, faha-107 sy i Afrika Atsimo, faha-109 ary i Mao­risy, faha-110.